प्राविधिकको प्रमाण पत्र बाडेर हुदैन सरकारले सीप दिएर व्यवस्थापन गरेमात्र देशमा किसान उपल्बधी लिन पाउछ : डा. कर्मुल्लाह - CIN Nepal News & Online Radio Network
प्राविधिकको प्रमाण पत्र बाडेर हुदैन सरकारले सीप दिएर व्यवस्थापन गरेमात्र देशमा किसान उपल्बधी लिन पाउछ : डा. कर्मुल्लाह
By CINN सम्वादाता	 पछिल्लो अपडेट Jun 23, 2020 339 0
कलैया, बारा ।।
कृषिमा दिने अनुदान प्रभावकारी छैन त्यसैलाई सहुलियत ऋणमा लगानी गर्दा प्रभावकारी हुनेछ । बारा पर्साको कृषि र पशु प्राविधिकहरूको दशै , दिपावली र छठको अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै विशिष्ट अतिथि प्रविधिक नारायण गुरूङले बताए ।
किसानले अाफुले गर्ने क्रम प्रति विश्वस्थ हुनु पर्नेमा गुरूङले जोड दिएका छन । सरकारले किसानले लगाएको बाली वा पालेको पशुको विमा गराउन सुविधा दिए पनि नेपालमा पाच प्रतिशत विमा गराउन सकेको छैन भन्दै किसानले अाफै उत्पादन गर्ने तर्फ व्यवस्थीत हुनु पर्ने बताए ।
अमेरीकाको प्रविधि ल्याउने कल्पना दिउसै सपना देखनु हो आफ्नो भएको प्रविधि सरक्षण गरि सदुपयोग गर्नु पर्नेमा जोड गुरूङले दिए । विशिष्ठ अतिथि डाक्टर कर्मुल्लाह अंसारीले प्राविधिकको प्रमाण पत्र बाडेर हुदैन सरकारले सीप दिएर व्यवस्थापन गरेमात्र देशमा किसान उपल्बधी लिन पाउछ बताए । सरकार चलाउनेहरू प्रमाण पत्रबाट ऋण पाउनेछ भन्ने मात्र हो प्रकृया धेरै झन्झटीलो रहेकोछ अंसारीले जनकारी गराए ।
किसानले पनि प्राविधिकहरू माथी विश्वास गर्दैन तर पनि आफै तरीकाले दौडदै गर्ने कारणले मनोबल घट्टी रहेको जनकारी गराएका छन । इजराइलबाट फर्केर आएका कृषि प्राविधिक सन्तोष यादवले नेपालमा पढने वितिकै जागीर चाहीन्छ भनेर पर निर्भर बनेर चलने गर्छ तर त्यो देशमा प्रमुखहरूले प्रशिक्षार्थी भन्दा बढी मिहनेत गरेर आफ्नो आम्दानी स्रोत बढाउने गरेकोछ ।
इजराईलको दुई दशमलव सात प्रतिशत जनता कृषीमा अधारित रहेकोछ जसले उत्पादन अरूदेशमा पठाउने गरेकोछ तर नेपालमा ८० प्रतिशत निर्भर रहदा पनि बाहिरबाट कृषि उपज मगाउने गरेको यादवले जनकारी गराए । समाज सेवी दिपेन्द्र कुशवाहाले किसानले उत्पादन गरेको मूल्य पाउदैन त्यस कारण उत्पादन हुन सकिरहेको छेन बताए । प्राविधिकहरूले जनकारी गराउने तर कार्यन्यन गराउने काम गर्दैन कुशुवाहाले सिकाय गरे ।
कलैया उपमहानगरपालिका वार्ड नम्वर १७ का डाक्टर हेमचन्द्र कुमार जैयसवारको आयोजनामा भएको शुभकामना अदान प्रदान कार्यक्रममा पूर्व शिक्षक सेवा आयोगको सदस्य योगेन्द्र जैसवालको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा प्राविधिक नवीन प्रजापति , शुभनारायण रौनियार , राकेश यादव समाजसेवी शिवदयाल पासवान किसान रामबाबु पाल लगायतकाले किसानको हितका लागि गर्नु पर्ने उपायको चर्चा गरेका थिए । बारा पर्साको कृषि र भेटनरी प्राविधिक , समाज सेवी , किसान र पत्रकार लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
Total Page Visits: 449 - Today Page Visits: 5
जनकनन्दिनी गाउँपालिकामा बजेटको दुरुपयोग ःस्थानीयको आरोप
पाल्पाबाट छुटेको जीप दुर्घटना, एक जनाको ज्यान गयो
धर्म तथा संस्कृति बचाउन राजा ल्याउन अपरिहार्य, मङ्सिर १८ गते…
दिनेश मेमोरियल टी ट्वान्टीमा आज सत्यम् पब्लिक काँलेज ७९ रनले…
बिगत ९ महिना देखि बन्द खुलाउन नेपाल सरकार माथि खनिय रम्भा…
This Month: 54161